Iwuli ihe omuma di omimi na Hubspot | Martech Zone
Iwuli Mgbidi ndebiri na Hubspot
Anyị bụ ndị amaghị nke ọma mgbe ọ na-abịakwute nyiwe maka ịzụ ahịa akpaaka, ọdịda peeji nke mmepe na azụmaahịa email. Anyị na-arụ ọrụ ma na-gbaara na Hubspot ezi a afọ ole na ole gara aga, na anyị masịrị anyị som nke atụmatụ, ma imewe ọcha ndị a bit obere. Nke ahụ abụghị ikpe ọ bụla.
Otu n'ime ndị nkwado anyị, FatStax, malitere na Hubspot mana emezighi nhọrọ niile. Dị ka ọtụtụ mmalite, ha na-arụ ọrụ na mmepe azụmaahịa ma ha enweghị oge iji mejuputa azịza ya n'ụzọ zuru ezu, yabụ ha rịọrọ anyị maka enyemaka dịka akụkụ nke usoro mmemme azụmaahịa zuru oke. Izu gara aga, ha malitere Mmemme Onye Mmekọ maka ụlọ ọrụ ịdebanye aha, ọ bụkwa nke mbụ anyị gbara na iwulite nnukwu ndebiri maka ha.
Ha nyere ndozi HTML, anyị wee sụgharịa nke ahụ Hubspot. Enwere m nlezianya na mbụ, na-eme ka ha mata na anyị ga-eme ihe niile anyị nwere ike inye usoro templating na Hubspot. Isi ihe na-emepe emepe template bụ na anyị nwere ike mejupụta template ahụ ma jiri ya maka akwụkwọ ndị ọzọ na ọdịda. Anyị kwesịrị ime ya n'ụzọ ziri ezi… ka otu na FatStax nwee ike ịme ndezi na enyeghị enyemaka anyị.
Mgbe ị matara ebe ikpo okwu ma nọrọ oge ụfọdụ Ihe eji eme ihe Hubspot, anyị nwere obi ụtọ na njirimara ọrụ na ntanetị nke omimi. N'etinyeghị na nkọwa zuru ezu, anyị ahụghị mgbochi ọ bụla na sistemụ templa ha ọbụla.
Nsonaazụ chọrọ obere obere tweaks, mana ọ karịrị ihe anyị tụrụ anya ya (na onye ahịa anyị). N'ezie, ekwenyere m na anyị mere naanị otu CSS dezie iji nweta ndebiri ọrụ zuru oke - lee ihe ọ dị ka ya:
Tags: okpokorommebe hubspotndebiri nke hubspotihu igwe
Ihe mere eji eme ahia kwesiri itinye ego na Instagram